rafozan-doza | Mey 2010
Efa koboko teto @ blaogy sy hoe tany @ tena fb hoe androany kay ny fetin'ny reny eto amin'ny tanana... naika odiako fanina fotsiny hoe sssssssssss efa mahafantatra doly ny olona rehetra fa je vous souhaite une joyeuse fete... kay za naharay imailaka avy any @ google calendar, izay nalefako t@ herin-taona hoe tokony manao lahatsoratra momba ny fetin'ny reny ah @ ity taona ity.
Rehefa nataoko anefa ny tena fandinihana dia hoy ah hoe ny fetin'ny reny angamba no anisan'ny zavatra hoe tsy dia misy zavatra azo lazaina loatra. Eny e, afaka miresaka ny hoe hankafy ny sarin'i Mialy Rajoelina* ndray zao radem. Izy moa izany no hoe mother of 3 and smoking hot fantatra @ anarana hoe MILF fa ny ankoatry izay dia tsy lany match @ categorie "tsisy dikany" eto @ ity tena fialam-boly ity ny fetin'ny reny.
Dia hoy aho hoe aleo mba asiana paragrafy iray misy dikany izany ee:
Ny reny an, dia olona faran'izay tsara fanahy indrindra eto ambonin'ny tany. Na dia hoe ratsy fanahy sy ratsy toetra be faran'izay loza aza izy any @ olon-kafa any dia @ zanany tsy maintsy tsara fanah foana. Ny zanaka lahy manokana dia tsy maintsy tia ny reniny foana ary tsy afa-manoatra aminy mihintsy fa na dia maditra tahaka ny inona aza dia tsy maintsy manao izay mety foana hoan'ny reniny. Ka ny antony hitenenako an'zany rehetra izany dia zao: ho anareo vehivavy isany hoe ny lelah no tena faly rehefa miteraka lahy kely hoe misy mandova, au minimum misy mitondra ny anarany fa ny vevavy no tokony ho sambatra kokoa satria ho hisy mpitia mandrakizay. Misy valisoa lehibe noho izany ve?
Mirary soa antsika reny rehetra.
Ho tahian'A/tra, ho ela velona.
Mirary soa ny future reny ihany koa,
mba hahazo zanaka lahy
ary hankafy izany fitiavana mandrakizay izany
gros bisoux n gros calins
ps: iangaviana ny zanaka vavy tsy hiady fitiavan-dreny eto
(*) I will vote for you if you decide to run in anything
05/30,2010 Sokajy awesome